Natsiridza maemail ako ehunyanzvi ane mafomula akagadziridzwa zvakanaka
Yakatumirwa ne Tranquillus | Nov 26, 2021 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Polite formulas inogoneka pakupera kwehunyanzvi email
Takatendeseka, zvakanaka, mazvita… Aya ese matauriro ane hunhu ekushandisa muemail yehunyanzvi. Asi chimwe nechimwe chazvo chine zvachinoreva. Inoshandiswawo maererano nekushandiswa kwakananga uye maererano neunogamuchira. Iwe uri mushandi wemuhofisi uye unoda kuvandudza kunaka kwekunyora kwako kwehunyanzvi. Ichi chinyorwa chinokupa makiyi ekubata zvirinani mataurirwo maviri akajairika.
Kurevesa: Mutsara une hunhu wekushandisa pakati pevezera
Shoko rekuti “Kuperera” mutsara une hunhu unoshandiswa mune imwe nyaya. Kuti tiinzwisise zviri nani, tinofanira kunongedzera kumavambo ayo echiLatin. "Kuperera," rinobva pashoko rechiLatini rokuti "Kor" rinoreva "moyo". Nokudaro anotaura "Nemoyo wangu wose".
Zvisinei, kushandiswa kwayo kwakachinja zvikuru. Pachokwadi, ikozvino inoshandiswa sechiratidzo chekuremekedza. Iyi fomula ine hunhu parizvino inoratidzirwa nekusarerekera divi rimwe chete. Tinozvishandisa kunyange nemunhu watisinganyatsozivi.
Nekudaro, pane imwe fungidziro yekubatana pakati pako nemunyori wako. Zvirinani, zvinofungidzirwa kuti une nhanho yakaenzana yehierarchical.
Pamusoro pezvo, isu tinoshandisa zvakare mutsara wekuremekedza "Kuperera," kuratidza ruremekedzo kumunyori wako. Ichi ndicho chikonzero tiri kutaura nezve fomula yekusimbisa.
Nekudaro, zvinokurudzirwa kuti usashandise fomu pfupi "CDT" mune email yehunyanzvi, kunyangwe uri kutaura nevaunoshanda navo.
Zvakanakisa mazvirokwazvo: Mutsara wekuremekedza wekutaura kune maneja
Kusiyana neformula yapfuura, fomula ine hunhu "Best consous" inopa kuremekedzwa kwakawanda kukuchinjana. Izvi zvakajairika nekuti tiri kutaura nemukuru. Ani nani anoti "Zvakanakai" anototi "Kwaziso dzakasarudzwa". Naizvozvo chiratidzo chekufungisisa kune wako interlocutor.
VERENGA Kuvandudza unyanzvi hwako hwokunyora
Kunyange kana mutsara wekuti "Zvakanaka" wakakwana pachawo, zviri nani kuti uti: "Ndapota gamuchirai maropafadzo angu". Kana iri yekugadzira, "Ndapota gamuchirai kutaura kwekunaka kwangu", hazvina kuipa, mumaonero evamwe nyanzvi.
Zvisinei, vekupedzisira vanoita kuti zvizivikanwe kuti kune imwe nzira yekuregererwa. Chokwadi, kwaziso yacho pachayo kutaura.
Chero nzira, zvakanaka kugona mafomula ane hunhu uye nekubatsira kwawo. Asi kuchine zvimwe zvinodiwa kuti uwedzere yako e professional. Saka nekudaro, iwe unofanirwa kutarisira nyaya yeshoko. Izvo zvakakoshawo kudzivirira kukanganisa kubva mukuderedza email yako.
Kuti uite izvi, zvinokurudzirwa kunyora maemail ako muIzwi kana kuisa mari muhunyanzvi hwekugadzirisa software.
Mukuwedzera, iwe unogona kunge usingazvizive, asi kushandiswa kwekunyemwerera hakukurudzirwe zvakare, senge inyanzvi email yemhando ye "paved".
Natsiridza maemail ako ehunyanzvi ane mafomula akagadziridzwa zvakanaka November 26th, 2021Tranquillus
pashureKutyisidzira kwekurwiswa kwerudzikinuro muFrance neGermany kwakaonekwa neANSSI neBSI
zvinoteveraTumira email kune mutariri wako: rudzii rwemhando yepamusoro fomula yekushandisa?
Teerera kune isipo meseji mubhokisi rako retsamba
Ban kuperetera zvikanganiso pabasa